Sheikh C/Qaadir Mu'min oo Fariin Xasaasi ah kasoo diray Buuralayda Golis, Baaq ku socda Shacabka Puntland iyo Maleeshiyaadka Faroole, waa maxay Xukunka maamulka Faroole (DHAGEYSO)
Written by Maamul on 12 April 2012. Sheikh C/Qaadir Mu'min oo ka mid ah Culimada Rabbaaniyiinta ah ee Soomaaliya ayaa gaaray Saldhiga Mujaahdiinta Xarakada Al Shabaab ey ku leeyihiin Buuralayda Golis.
Sheikh C/Qaadir Mu'min oo ah Sheikh caanka ah Bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ayaa sanadkii 2010-kii waxa uu kasoo Haajiray mid ka mid ah dalalka Yurub waxana uu Shiikhu xiligaas saldhig ka dhigtay gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya oo ah halka ay ka arimiyaan Wilaayaadka Islaamiga ah.
Halkaan Ka Dhageyso Fariinta Sheikh C/Qaadir Mumin Xafidahullaah
Gaalada ayuu ka dhigay dadka ugu fiican Bini aadamka halka uu dadka Muslimiinta ahna ka dhigay dad dulaysan, Gaaladii ayuu xurmeeyey Muslimiintiina wuu liiday, Muslimiintii ayuu Xabsiyada ka buuxiyey gaaladiina waxa ay si maamuus iyo sharaf leh ugu dhex nool yihiin deegaanka uu ka arimiyo maamulku. Gaaladii ayuu uga hiiliyey Muslimiinta, Muslimiintii ayuu u gacan galiyey gaalada, waxana uu ku farxaa guushada gaalada iyo dhibaatada muslimiinta. waxaana si kore uga taliya gobolada Puntland Maraykanka, waxaana si hoose uga taliya Itoobiyaanka.
Qawaaniintii ay gaaladu dajiyeen ayuu ku biiray, waxana uu aqoonsaday waxa loogu yeero Qaramada Midoobay, waxa uu fulinayaa qodob kasta oo ka mid ah qodobada ay saxiixeen Q/Midoobay oo ah kuwa khilaafsan diinta Islaamka.
Waxa uu u dagaalamayaa Jidka DAAQUUTKA, waxa uu booriyaa oo amaanaa Ahlul Shirkiga, waxayna uu la diriraa Muwaxidiinta. Waxa uu Dajiyey Qaanuun gacan ku samays ah oo uu hadda doonayo in uu ansixiyo.
Intaas ka dib Sheikh C/Qaadir Mu'min ayaa Baaq u diray Askarta iyo ciidanka u dagaalama maamulka Faroole.
Sheikh C/Qaadir Mu'min ayaa yiri "Askarta u shaqaysa, difaacaysa, hubka u sida maamulkaas Ridada ku dhacay ee gaaloobay ayaguna waxa ay la xukun yihiin maamulkaas Murtadiinta ah , waana isku xukun" Waxana uu Sheikhu ugu baaqay in ay ka Toobadkeenaan arinka ay faraha kula Jiraan "waxaan ugu baaqayaa in ay ka toobad keenaan oo Allaah u noqdaan hubkana iska dhigaan" ayuu yiri Sheikhu.
Sheikh C/Qaadir ayaa asaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu u sheegay askarta Puntland in Faroole uusan waxba u tarayn maalinta Qiyaamaha waxana uu Sheikhu yiri "Faroole iyo ragiisu aakhiro waxba idiinma tarayo, dhaxan ayaad hurudaan cidlaan jiiftaan, Qaad ayaad cunaysaan, Faroole nolol aduun ayuu ku jiraa, oo aduunka wax ayuu ka qabsaday, maalinba meel ayuu u duulaa oo gaalo kula jiraa, nolol wanaagsanna wuu ku nool yahay, Waxaan idiinku Baaqayaa in aad ka tagtaan dagaalka aad Diinta Allaah kula jirtaan"
Sheikh C/Qaadir ayaa Diginiin u diray Askarta iyo Maleeshiyaadka Faroole waxana uu yiri "Waan idiin digayaa, Mujaahidiintu way qabsan doonaan dhulkaan maalin uun, diinta allaah cid ka guulaysan karta ma jirto, Allaah askartiisa ayaa guulaysanaysa xili walbaa, hadhow la idinkama yeeli doono bariis ayaan raadinaynay iyo wax la mid ah, maamulkaan waa la ridayaa maalin uun shareecda islaamkana waa lagu xukumi dhankaan dhulkaan, la idinkama yeelayo hadhow waxaan raadinaynay Bariis, hadaad Allaah u toobad keentaan irsaaqada allaah waa idiin badinayaa"
Sheikh C/Qaadir Mu'min ayaa dhanka kale Baaq u diray Shacabka ku nool Mandiqadda Puntland waxana uu Sheikhu yiri "Waxaa laga yaabaa in aad tiraahdaan waa nala liiday waan baqaynaa, waan dhibaataysannahay, waa nala xir-xiray , arinkaas Allaah agtiisa kama soconayso kamana noqonayso cudurdaar, nin weyn oo wax walbaa hasyta in uu dhaho waa la idaciifsaday lagaama yeelayo, dhulka allaah waa weyn yahay ee qof walbaa ha tago meesha uu ku cibaadaysan karo"
Shiekh C/Qaadir Mu'min ayaa ka jawaabay hadalada ay maalmahii dambe wadeen qaar ka mid ah kuwa cadowga u shaqeeya kaas oo ahaa in Jihaadkii uu istaagay ka dib markii laga adkaaday Mujaahidiinta.
Sheikh C/Qaadir ayaa yiri " Gaaladii soo gashay qayb ka mid ah dhulka Muslimiinta maanta ayaga ayaa Go'doon ku jira, Mujaahidiinta ayagaa wata khidada dagaalka, waxaana ay ku faafeen Soomaliya oo dhan, Ilaa Kenya ilaa Itoobiya illaa Gobolada Waqooyi Barri, Wilaayaadkii islaamigu waa dhisan yihiin, Dagaalku hadda ayuu faafay oo sii balaartay, meel walbaa way joogaan mujaahidiintu, gaaladiina waxaa haysata dhib iyo rafaad" "Jihaadkii Hadda ayuu Bilowday, waxa uu ku faafay dhammaan dalka Soomaaliya, waa in la qaataa Qorayaha oo loo dagaalamaa diinta Allaah, oo qof walbaa uu u istaagaa Difaaca Diinta Allaah"
"Shacabka reer Puntland waa in ay la mid noqodaan Shacabka reer Koonfureed oo aygu u istaagay difaaca diinta Allaah,, Rag , Dumar, Ganacsato iyo Culimoba waxay qoriga u qaateen dagaalka Jihaadka ah ee lagula jiro gaalada iyo Murtaddiinta".
"Waxaan idiinku Baaqayaa in aad Jihaadka kasoo qayb gashaan, qabaa'ilku waa in ay u kala tartamaan u gargaaridda Diinta Allaah, si la mid ah sida ay sameeyeen Qabaa'ishii Koonfureed".
Gabagabadii: Sheikh C/Qaadir Mu'min ayaa haatan waxa uu la joogaa walaalihiisa Mujaahidiinta ah ee horay ugu sugnaa Buuralayda Golis, ayada oo Bilihii ugu dambeeyey ay si xowli ah u gaareen deegaankaas dhalinyaro aad u fara badan oo iskaga kala yimid magaalooyinka uu ka kooban yahay Degaanka Puntland.
Saddex maalmood ka hor ayey ahayd markii ay Warbaahinta Islaamiga ah ee Soomaaliyeed ay Iclaamiyeen fariinta codka ah ee ka timid Sheikh C/Qaadir Mu'min ayaga oo xiligaas ay Warbaahintu Qarisay magaca Sheikha, mudadaas ka dib ayey qaar ka mid ah Warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay isku dayeen in ay Qiyaasaan Sheikha uu noqon karo Sheikha gaaray Galgala.
Idaacadda Shabelle ayaa sheegtay in Sheikh Fu'ad Maxamed Khalaf uu yahay Caalimka gaaray Galgala, waxana ay Shabelle arinkaas kala kulantay wagi gabax balaaran.
Qaar ka mid ah mowaaqicda ay adeegsadaan culimadii leexatay ee ka inxiraaftay jidkii Salafka ee toosnaa ayaa fursad dahibi ah u arkay in ay ka faa'idaystaan Iclaamkii Warbaahinta Islaamiga ah, ka dibna waxa ay si qiyaas ah ku sheegaan in Sheikha Gaaray Galgala uu yahay Sheikh C/Qaadir Mu'min, waxaan shaki ku jirin in qaar ka mid ah Warbaahinta u adeegta ururka Al ictisaam ay la shaqeeyeen Sirdoonka Faroole, waxana ay warbaahintaasi u shaqaysaa qaab Qabyaaladeed oo iska cad.
Halkaan Ka Dhageyso Fariinta Sheikh C/Qaadir Mumin Xafidahullaah SomaliMeMo waa Shabakad Soomaaliyeed oo Islaami ah oo ka madax banaan koox, urur iyo Xisbi, kumana hadasho cid gooni ah afkooda.